उद्योग, वाणिज्य संवाद परिषद: प्रधानमन्त्रीले किन चोरबाटोबाट छिराए यी चार व्यवसायीलाई ? « GDP Nepal
उद्योग, वाणिज्य संवाद परिषद: प्रधानमन्त्रीले किन चोरबाटोबाट छिराए यी चार व्यवसायीलाई ?
Published On :3October, 2018 8:44 am
काठमाडौं । सरकारले १५ दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन गर्ने निर्णय ग¥यो ।
परिषदमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति, ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइ तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सदस्य रहने भनिएको थियो भने निजी क्षेत्रबाट को पर्दैछन् भन्ने सर्वत्र चासो थियो ।
एक महिनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सोमबार मनोनयनको लिष्ट सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाउन सक्ने व्यवसायीहरुले परिषदमा भूमिका पाएका छन् ।
त्यसो त परिषदमा पर्न निजी क्षेत्रको दौडधुप निकै चर्को पनि थियो भने ओली आफैंले रुचाएका व्यक्तिहरु नपर्ने कुरै थिएन ।
परिषदमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघलगायतका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनु त स्वाभाविकै थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीसँग विशेष सम्बन्ध भएका उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ र महिला चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षलाई पदेन सदस्य भनिएको छ । उच्च मावि संघका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र महिला चेम्बरका अध्यक्ष अञ्जान शाक्य दुवै प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालय सदस्यसरह हुन् ।
गोल्डेन गेट कलेजका सञ्चालक सिलवाल प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि थिए भने शाक्यलाई मिडियाबाट परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा ओलीले नै आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा ल्याएका थिए । उनका श्रीमान अजय क्रान्ति अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सल्लाहकार थिए भने हाल प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
त्यसो त नेपालमा महिला चेम्बर छ भन्ने थाहा सायद समितिका सदस्यहरुमध्ये कमैलाई थाहा होला । चेम्बर अध्यक्ष नै पदेन सदस्य भएको संस्थामा यसको भगिनी संगठनका रुपमा स्थापित महिला चेम्बरलाई पदेनकै हैसियतमा मनोनयन गरिएको छ ।
निजी शिक्षा व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नै गराउने उद्देश्यभ ए प्याब्सन थियो तर प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएकै कारण पदेन सदस्यका रुपमा हिसानलाई भित्र्याइएको छ ।
यस्तै, कुनै पनि परिषदमा व्यक्ति नभै संस्थाका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुन्छन् । तर, सरकारले कुनै पनि संस्थामा नामै किटेर पूर्वअध्यक्षलाई पदेन सदस्य बनाएको छ । जसमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष लता प्याकुरेल छन् ।
एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्ट र घरेलु अध्यक्ष श्याम गिरीलाई नियतबश बाइपास गरेर लामिछाने र प्याकुरेललाई पदेन सदस्यका रुपमा अघि सारिएको छ । प्याकुरेल तत्कालीन एमाले नेता तथा मानव अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलकी श्रीमती पनि हुन् । घरेलु अध्यक्षमा एमाले मोरङका नेता श्याम गिरी रहे पनि उनलाई अवसरबाट बञ्चित गरिएको छ ।
परिषदका अन्य सदस्यहरुमा अटो व्यवसायीका रुपमा स्थापित सुरज वैद्यलाई कृषि व्यवसायीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । उनी चिया उद्योगमा पनि संलग्न भए पनि उनको पहिचान भने टोयोटा गाडी बिक्रेता नै हो ।
यस्तै, उद्योगमन्त्रीले केही दिनअघि आफैं निम्बसको उद्योगमा शिलबन्दी गरेका उद्योगका सञ्चालक जगदीश अग्रवाल तथा अष्ट्रिच व्यवसायी सीपी शर्मा पनि कृषिबाटै सदस्य भएका छन् ।
वाणिज्य बैंककमा पहिलो महिला सीईओ अनुपमा खुँजेली, सार्क महिला उद्यमी महासंघकी प्रमिला रिजाल आचार्य, होटल व्यवसायी अम्बिका श्रेष्ठ पनि सदस्य भएका छन् ।
बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योतीलाई जलविद्युत उद्यमीका रुपमा अघि सारिए पनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।
मेडिसिटी हस्पिटलका उपेन्द्र महतो नर्भिकका वसन्त चौधरीलाई औषधि उद्यमीका रुपमा व्याख्या गरेर सदस्य बनाइएको छ ।
यस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रविभक्त श्रेष्ठ, नागरिक उड्डयनबाट प्रधानमन्त्री ओली निकटकै आङछिरिङ शेर्पा, मिडिया उद्यमीबाट कैलाश सिरोहिया, प्रविधि उद्यमी विश्वास ढकाल, सिनेमा हलका व्यवसायी नकिम उद्दिम तथा उत्पादनमूलक उद्योगबाट लोकमान्य गोल्छा र चिरञ्जीलाल अग्रवाल सदस्य परेका छन् ।